Semalt: स्पाम को बहिष्कार
यदि तपाईंले गुगल एनालिटिक्स खातामा लग ईन गर्नुभयो र सेसनहरूमा अचानक स्पाइक अवलोकन गर्नुभयो भने, सम्भाव्यता यो छ कि बट्स र रेफरल स्प्यामले तपाईंको वेबसाइटमा चोट पुर्‍यायो। झलकमा तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि यसले तपाइँको बिक्री र लिड्स प्राप्त गर्दछ, तर सत्रको स्रोतलाई नजिकबाट हेर्दा तपाइँ कहाँ ट्राफिक आउँदैछ भनेर विचार दिनुहुन्छ। स्प्यामबट्स मुख्य रूपले कम गुणवत्ता वेबसाइट ट्राफिकको लागि जिम्मेवार छन्। ज्याक मिलर, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन् कि हालका बर्षहरूमा , अधिक र अधिक वेबमास्टर्सहरूले रेफरर स्पाम बट्स उनीहरूको साइटहरू क्रल गरेको गुनासो गरेका छन् र यस्तो देखिन्छ कि वास्तविक व्यक्तिहरूले तपाईंको वेब पृष्ठहरू भ्रमण गरेका छन्। कालो टोपी एसईओ र नकारात्मक स्प्याम बट्सले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स डाटालाई ठूलो स in्ख्यामा स्कि। गर्न सक्दछ। यसबाहेक, यी बट्सहरू देखा पर्दछ जब उनीहरू तपाईको साइट मा धेरै पटक भ्रमण गरेका थिए तर बाउन्स रेट १००% हो। तपाईलाई सकरात्मक डेटा प्रदान गरिएको छैन, र तपाईको साइटको दर्जा दिन प्रति दिन घट्न थाल्छ।
स्पाम बोट भनेको के हो?
बट्स स्वचालित प्रोग्रामहरू हुन् जुन कुनै म्यानुअल इनपुट बिना कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ। एक बोट असंख्य कार्यहरू गर्नको लागि जिम्मेवार हुन्छ जुन वास्तविक व्यक्तिले घण्टा, दिन र हप्ताहरू भित्र पूरा गर्न सक्दछ। बट्सले एक पटकमा धेरै कार्यहरू पूरा गर्न केहि सेकेन्ड लिन्छ र तपाईंको साइट अप्राकृतिक रूपमा भ्रमण गर्न सिर्जना गरिन्छ।
अवैध र वैध बट्स बीचको भिन्नता
वैध वा वास्तविक बोटहरू खोज इन्जिनहरू जस्तै बिंग, याहू, र गुगलसँग सम्बन्धित छ। तिनीहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई सूचिकृत गर्न सक्दछन् र खोज इञ्जिन परिणामहरूमा तपाइँको सबै पृष्ठहरू देखाउँदछ। यी बट्सले तपाइँको साइटलाई कुनै पनि हिसाबले हानी गर्दैन, जबकि अवैध बोट्स तपाइँको वेबसाइटलाई हानी गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरूले तपाईंको साइट भ्रमण गर्छन् र तपाईंलाई धेरै हेराईहरू पाउन सक्छन्, तर तिनीहरू साइट मैत्री छैनन् र तिनीहरूलाई नकारात्मक बट्स भनिन्छ। सब भन्दा सामान्य र प्रख्यात स्पाम रेफरल बट्स ईन्भेन्ट-ट्रैकिंग.com, फ्री- शेयरेबटोन डॉट कॉम, सोशल- बुटन्स डॉट कॉम, darodar.com, र get-free-traffic-now.com हो।
त्यहाँ यी वेबसाइटहरुका वरिपरि केहि भिन्नताहरु छन्, र तिनीहरुको URL हरू Google एनालिटिक्स खाताहरुमा स्वत: देखा पर्दछ। यदि तपाइँ यी कम्पनीहरू र उनीहरूको विज्ञापन प्याकेजहरूको बारेमा अधिक जान्नको लागि तिनीहरूको URL लाई अनुसरण गर्नुहोस्, सम्भावना हुन सक्छ कि त्यसले तपाइँको वेबसाइटलाई हानी गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ तपाइँको गुगल एनालिटिक्स खाता मा एक रेफरल स्पाम (see-your-website-here.com) देख्नुहुन्छ भने, तपाइँ यत्ति चाँडो यसलाई हटाउनु पर्छ।
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा स्पाम बट्स कसरी रोक्ने?
लगभग सबै स्प्याम रेफरल साइटहरू ठूलो अपराधी हुन् र सकेसम्म चाँडो हटाउनु पर्छ। यदि तपाईं आफ्नो गुगल एनालिटिक्स खातामा नयाँ रेफरल स्प्याम भेट्टाउनु हुन्छ भने, तपाईंले यसलाई फिल्टर गर्नु पर्छ, तर यो प्रक्रियाको नकारात्मक पक्ष भनेको खराब बुट्सले तपाईंको वेबसाइट बारम्बार भ्रमण गरिरहन्छ। यसको मतलब हो कि तिनीहरूले तपाईंको सर्भरको संसाधन लिनेछन् र तपाईंको साइटको लोड गतिमा प्रभाव पार्नेछन्। यद्यपि सबै स्प्याम वेबसाईटहरूलाई रोक्नको लागि .htaccess फाईल प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो भन्न लायक छ कि .htaccess फाईल सम्पूर्ण श way्कास्पद साइट रोक्नको लागि एक शक्तिशाली तरीका हो।
पहिलो चरण भनेको तपाइँको .htaccess फाइलमा एक विशिष्ट कोड घुसाउनु हो। यदि यो फाईल सही तरीकाले काम गरिरहेको छैन भने तपाईले नयाँ .htaccess फाईल डोमेनको मूलमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। स्प्याम बोट फिक्स गर्न अर्को द्रुत र सजिलो तरीका तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा उन्नत फिल्टरहरू बनाएर हो। तपाईको खातामा लग इन गर्नुहोस् र प्रशासन ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। यसबाट, तपाइँ नयाँ दृश्य सिर्जना गर्नुहोस् विकल्पमा जानुपर्नेछ, र रिपोर्टि view दृश्य नाम अनुभाग अन्तर्गत, तपाइँ एउटा स्पाम नि: शुल्क बटन देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाईंले नयाँ फिल्टर विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र तपाईंको फिल्टरको नाम दिन नबिर्सनुहोस्।